IWCA နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံ – နိုင်ငံတကာစာရေးဌာနများအသင်း
IWCA 2022- Un-CFP တစ်ခု
အောက်တိုဘာလ 26-29, 2022
IWCA အဖွဲ့ဝင်များသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စင်တာများနှင့် မတူညီသော အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း ၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကို မျှဝေပေးသည့်အတွက်ကြောင့် စာရေးစင်တာ လေ့ကျင့်သူများသည် စာရေးစင်တာလုပ်ငန်း၏ များပြားလှသော စာရေးဌာန၏ သဘောသဘာဝ၊ ကြီးကြပ်မှု၊ နေရာလပ်များ၊ လူသားလုပ်အား၊ သုတေသန၊ သုတေသန၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အကျင့်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးအပြင် အလေ့အကျင့်များကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောဘာသာစကား။
> ဩဂုတ်လ 1 ရက်နောက်ပိုင်းတွင် $350
> ၂၀၇,၅၀၀ ကျပ်
ဤသည်မှာ ကနေဒါအစိုးရ၏ သတင်းအချက်အလတ်ဖြစ်သည်။ ကနေဒါသို့ဝင်ရောက်.
မင်းရဲ့ တည်းခိုခန်းတွေကို မှာထားပါ။ Sheraton Vancouver Wall Center မှ ဘဏ်တစ်ခုတွင် အခန်းများကို မယုံနိုင်လောက်စရာ နှုန်းထားဖြင့် $209.00 CAD ($167.00 USD) ဖြင့် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားသည်။ ဒီမှာ ဗန်ကူးဗားသို့လမ်းညွှန်.
ကြာသပတေးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 27 ရက် :9မှ 5:45 အပိုင်း
သောကြာနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 28 ရက်-9ရက်မှ 5:45 နာရီအထိ
6:00 Affiliate အစည်းအဝေးများ
စနေနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 29 ရက်-9ရက်မှ 1:15 နာရီအထိ
12:30 IWCA ဘုတ်အဖွဲ့ နေ့လည်စာ
နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော အစဉ်အလာလမ်းကြောင်းအတိုင်း လိုက်နာရမည့်အစား၊ ၎င်းတို့၏ဗဟိုချက်မဗဟိုတွင် ပြဿနာများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများကို အဖွဲ့ဝင်များအား တင်ပြရန် ဖိတ်ကြားသည့် Un-CFP ကို ​​အောက်ပါအတိုင်း ဖြည်းညှင်းစွာ အမျိုးအစားခွဲထားသည်-
အလုပ်သမားနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု
ဘာသာစကား၊ တတ်မြောက်မှု၊ နှင့် ဘာသာစကားတရားမျှတမှု
နိုင်ငံရေး၊ အာဏာနှင့် ဆက်ဆံရေး
လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၊ ကိုလိုနီစနစ်၊ ဘာသာဗေဒ၊ တတ်နိုင်သူ၊ လိင်တူချစ်သူ၊ လိင်ပြောင်းမုန်းတီးမှု၊ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှု၊ နှင့် Islamophobia တို့ကို တည်တံ့သည့် ဖိနှိပ်မှုဆန့်ကျင်ရေးမူဘောင်များ
ကျွန်ုပ်တို့သည် COVID အခြေအနေနှင့် ခရီးသွားလာမှုနှင့် လူကိုယ်တိုင်စုရုံးမှုများအပေါ် ၎င်း၏သက်ရောက်မှုများကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပြီး လိုအပ်သလို ကျွန်ုပ်တို့၏ အစီအစဉ်များအတွက် အပြောင်းအလဲများရှိပါက ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
ဒီမှာ ဝင်ရောက်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ကနေဒါကနေဒါအစိုးရ။
မေးခွန်းများ? Shareen Grogan၊ IWCA 2022 ညီလာခံသဘာပတိ၊